Ngwa 4 nwere ego nke ihe kariri 60% maka obere oge | Esi m mac
Ngwa 4 nwere ego nke ihe karịrị 60% maka obere oge
Monday agafeela ngwa ngwa. Ternyaahụ ọ dị ka ọ ga-agwụ agwụ mana n'ikpeazụ ọ dị ka agịga agịga, na anyị na-atụ ya ụjọ ma ọ na-adịgide naanị nke abụọ ma ọ jọghị njọ. Ma otu a ka anyị siri ruo Tuesday, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu ntabi anya iji chọpụta ihe nkwalite ọhụụ na anyị nwere dị na ngwa maka Mac.
Taa, ewetara m gị nhọrọ nke anọ bara uru ngwa, ngwaọrụ anọ nke ị nwekwara ike itinye ihe okike gị n'ule ị ga-enweta ọtụtụ ihe na kọmputa Mac gị. Ọzọkwa, ha niile na mbelata ihe karịrị 60%, ngwa nkwụnye ụgwọ nke ị nwere ike nweta naanị otu euro ma ọ bụ abụọ. Echefula ya!
1 Liquivid Video jikọrọ ọnụ
2 GIF Onye kere Movavi
3 Folọ nyocha Infographics maka Isi Okwu
4 MyKeep ederede maka Google Nọgidenụ
Liquivid Video jikọrọ ọnụ
Anyị malitere na «Liquivid Video jikọrọ ọnụ», na ngwa nke ị nwere ike jikota multiple obere vidiyo n'ime otu naanị n'ụzọ dị mfe. Họrọ kpọmkwem akụkụ ị chọrọ mbupụ na vidiyo ọ bụla, wee họrọ ụda ụda, ma ka anyị jikọta! Ngwa bụ cKwekọrọ n'Ozizi na niile na-ewu ewu video formats na codecs na mkpebi ọ bụla, gụnyere HD, 2K, na 4K. Na n'ihi ọhụrụ videos na-exported na MP4 format na H.264 codec.
Usualgwọ ya bụ .6,99 1,09 mana ị nwere ike nweta ya naanị € 4 rue echi, Wenezdee, Ọktọba XNUMX, n'etiti abalị.
liquivid Video jikọrọ ọnụfree
GIF Onye kere Movavi
Anyị na-aga n'ihu na «GIF Maker Movavi», ngwa nke anyị gwara gị maka n'oge ọzọ ma na-enye gị ohere ọhụụ iji nweta nnukwu ego.
Na «GIF Maker Movavi» ị nwere ike mepụta GIFS gị ngwa ngwa na ngwa ngwa iji fim, vidio egwú, ihe ngosi ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ i nwere na ihuenyo Mac gị. Mgbe ahụ ị nwere ike ịkekọrịta GIFS gị na netwọk mmekọrịta, site na email, ozi, tinye ha na nkwupụta gị, wdg.
Ọnụ ego ya karịa euro iri na ise mana ugbu a ị nwere ike nweta ya maka naanị € 2,29 Ruo echi, Wenezdee Ọktọba 4 n’etiti abalị.
Folọ nyocha Infographics maka Isi Okwu
Anyi wee mechie ya “Infographics Lab for Key Key”, ngwa oru ozo anyi agwala gi n’ime ya Esi m mac Yabụ, ọ bụrụ n ’ịgbaghara nkwalite gara aga maka na ịbịaghị n’oge, ugbu a ị nwere ohere ọhụụ iji nweta ya n’ọnọdụ dị ịtụnanya
"Infographics Lab for Key Key" bu ihe a nchịkọta ọtụtụ puku ihe ga - enyere gị aka ime ka okwu gị baa ọgaranya, Apple onye na-eme ihe ngosi ngwa gụnyere na iWork. Ọ gụnyere ihe maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isiokwu ọ bụla (eserese, eserese, maapụ izere obodo, steeti, mba na mpaghara, ọkọlọtọ na ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, a chọtara ihe onyonyo niile dị na nchịkọta a na uzo uzo nke mere na i nwere ike idowe ha na-enweghị ike na ụdị ọ bụla nke ndabere, nke agba ọ bụla, ma ọ bụ na onyonyo ọ bụla ọzọ.
"Infographics Lab for Keynote" bu ihe eji eme ka ejiri ya nye Keynote, mana inwere ike tinye ya na Peeji, Onu Ogugu, onye isi akwukwo iBooks na ngwa ndi ozo.
Ọnụ ego ọ na-emebu karịrị euro iri abụọ mana ugbu a ị nwere ike nweta ya maka naanị € 2,29 Ruo echi, Wenezdee Ọktọba 4 n’etiti abalị.
Infographics Lab - ndebiri27,99
MyKeep ederede maka Google Nọgidenụ
Ma ọ bụrụ na ị jiri Google Keep dị ka ngwa ọrụ ederede gị, ọ bụ ezie na enweghị m ike ịhụ ihe kpatara ya, "MyKeep Notes for Google Keep" ga-adabara gị dị ka uwe aka n'ihi na ọ bụ unofficial ahịa maka Google Keep na Mac gị.
Na enweghị ngwa ọrụ, iji Google Nọgidenụ na ihe nchọgharị abụghị ahụmịhe kachasị mma. Site na «MyKeep Notes maka Google Keep» ị nwere ike jiri Google Nọgidenụ jiri ọsọ ọsọ wee lelee ndetu, mepụta ederede ọhụrụ, dezie ndetu na ihe a niile site na iji ụzọ mkpirisi keyboard ma ọ bụ site na desktọọpụ desktọọpụ, menu menu ...
"MyKeep Notes for Google Keep" nwere ọnụahịa mgbe niile nke euro 5,49 mana ugbu a ị nwere ike nweta ya maka naanị € 2,29 Ruo echi, Wenezdee Ọktọba 4 n’etiti abalị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ngwa 4 nwere ego nke ihe karịrị 60% maka obere oge
Jiri akwụkwọ ndebiri a mepụta akwụkwọ Office ọ bụla
VLC 3.0 dị n'ụzọ ya: na-emezi n'ime, mana ọ dị mkpa iji melite interface ya